सर्वसाधारणको उपचारमा खटियो नेपाली सेना - Everest Dainik - News from Nepal
महोत्तरीः सर्वसाधारणको उपचारमा नेपाली सेना खटिएको छ । वीरेन्द्र सैनिक हस्पिटलबाट औषधि, विशेषज्ञसहितको टोली लिएर सेना महोत्तरी पुगेको हो ।
महोत्तरीको सीमावर्ती गाउँ खखनामा सेनाले मंसिर २७ गतेबाट वृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको संचालन गरिरहेको छ।
शिविर पुस ५ गतेसम्म चल्ने छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी डा. देवेन्द्र बहादुर खत्रीको नेतृत्वमा विभिन्न रोगका ६० जना विशेषज्ञ डाक्टरहरु उक्त शिविरमा खटिएका छन् । ती चिकित्सकलाई २ सय भन्दाबढी नेपाली सेनाका स्वास्थ्यकर्मीले सघाइरहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस अनशनस्थल सार्न डा. केसीलाई दबाव, काठमाडौं ल्याउन सेनाको हेलिकप्टर डडेल्धुरामा
सेनाको शिविरबाट स्वास्थ्य सेवा लिने मनिहरुको संख्या ठूलो छ। दुई दिनमा सेनाले ५ हजार १४४ जनाको ओपेडीमा जाँच गरेका छन् । पठाघर, पितथैलीले, हर्निया लगायत ४५ जानको अपरेशन गरिएको नेपाली सेनाका सहायक रथी डा. खत्रीले जनाए।
शिविर सञ्चालन समितिका समन्वयकर्ता समेत रहेका महोत्तरी–४ का प्रतिनिधि साभाका सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले नौं दिने शिविरमा २० हजार विरामीको स्वास्थ्य चेकजाँच हुने बताए ।
शिविरमा ५०० जना गम्भीर प्रकारका विरामीको अप्रेशनसमेत गरिने छ । समान्य खालको विरामीको शिविरमै अपरेशन भइरहेको छ भने गम्भीर अपरेशन जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा गरिने व्यवस्था छ । शिविर संचालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७० लाख नेपाली सेनालाई प्रदान गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस सेनाद्वारा सेनानी रामचन्द्र तिवारीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय
ट्याग्स: उपचार, नेपाली सेना, सर्वसाधारण